2 Tantara 31 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
2 Tantara 31:1-21
31 Raha vao vitan’izy ireo izany rehetra izany, dia lasa nankany amin’ireo tanànan’i Joda+ ny Israelita rehetra+ teo, ka nopotehiny ny tsangambato masina,+ sady nokapainy ny tsato-kazo masina,+ ary noravany ny toerana avo+ sy ny alitara+ nanerana an’i Joda+ sy Benjamina sy Efraima+ ary Manase,+ ka tsy nasiany niangana. Avy eo dia samy nody tany amin’ny lovany, tany amin’ny tanànany avy, ny zanak’Israely rehetra. 2 Ary notsinjarain’i Hezekia araka ny fizarana+ nisy azy avy ny mpisorona sy ny Levita,+ araka ny anjara fanompoan’ny mpisorona+ sy ny Levita+ izay nisahana ny fanatitra dorana+ sy ny sorona iombonana,+ mba hanompoan’izy+ ireo sy hanolorany fisaorana+ sy fiderana+ eny amin’ireo vavahadin’ny tranon’i Jehovah. 3 Ary nanome tamin’ny fananany+ ny mpanjaka mba hanaovana fanatitra dorana,+ dia ny fanatitra dorana amin’ny maraina+ sy amin’ny takariva, sy rehefa sabata+ sy tsinam-bolana+ ary fotoanan’ny fety,+ araka izay voasoratra ao amin’ny lalàn’i Jehovah.+ 4 Nilazan’ny mpanjaka koa ny vahoaka nonina tao Jerosalema mba hanome ny anjaran’ny mpisorona+ sy ny Levita,+ mba hahafahan’izy ireo hanaraka+ tsara ny lalàn’i Jehovah.+ 5 Raha vao nivoaka izany tenin’ny mpanjaka izany, dia nampitomboin’ny zanak’Israely+ ny voaloham-bokatra tamin’ny varimbazaha+ sy divay vaovao+ sy menaka+ sy tantely+ ary ny vokatra rehetra avy teny an-tsaha.+ Be dia be koa ny ampahafolon’ny zava-drehetra nentiny.+ 6 Nentin’ny zanak’Israely, sy ny taranak’i Joda izay nonina tany an-tanànan’i Joda+ koa ny ampahafolon’ny omby aman’ondry sy ny ampahafolon’ny zava-masina,+ izay nohamasinina ho an’i Jehovah Andriamaniny. Eny, nitondra izy ireo ka nanome vokatra niavosa be. 7 Tamin’ny volana fahatelo+ izy ireo no nanomboka nampiavosa ny vokatra, ary tamin’ny volana fahafito+ no nahavitany izany. 8 Rehefa tonga i Hezekia sy ny andriana+ ka nahita ireo vokatra niavosa, dia nidera+ an’i Jehovah sy nitso-drano ny Israely olony+ izy ireo. 9 Ary nanontany an’ireo mpisorona sy Levita momba an’ireo vokatra niavosa+ i Hezekia. 10 Dia hoy i Azaria+ lehiben’ny mpisorona, taranak’i Zadoka:+ “Nanomboka tamin’ny fotoana nitondran’ny olona ny fanomezana+ tao an-tranon’i Jehovah, dia nihinana izy ireo ka voky,+ ary mbola be dia be ny ambim-bava.+ Fa notahin’i Jehovah ny olony,+ ary ireo be dia be ireo ny sisa tavela.” 11 Dia nasain’i Hezekia nomanina ny efitra fisakafoana+ tao an-tranon’i Jehovah. Koa nomanin’izy ireo izany. 12 Ary nampiditra ny fanomezana+ sy ny ampahafolon-karena+ ary ny zava-masina izy ireo, ka mendri-pitokisana+ tamin’izany. I Konania Levita no niandraikitra an’ireny, ary i Simey rahalahiny no nanarakaraka azy. 13 Ary i Jehiela sy Azazia sy Nahata sy Asahela sy Jerimota sy Jozabada sy Eliela sy Jismakia sy Mahata ary Benaia, no mpiadidy nanampy an’i Konania sy Simey rahalahiny, araka ny didin’i Hezekia Mpanjaka. Ary i Azaria+ no lehiben’ny tao an-tranon’Andriamanitra. 14 Ary i Kore zanak’i Jimna Levita, izay mpiandry vavahady+ teo atsinanana,+ no niandraikitra ny fanatitra an-tsitrapo+ ho an’Andriamanitra, ka nizara ny fanomezana natolotra ho an’i Jehovah+ sy ny zavatra masina indrindra.+ 15 Teo ambany fifehezan’i Kore tany amin’ireo tanànan’ny mpisorona+ i Edena sy Miniamina sy Jesoa sy Semaia sy Amaria ary Sekania. Mendri-pitokisana+ izy ireo, ka andraikiny ny nanome ny anjaran’ireo rahalahiny tao amin’ny fizarana+ tsirairay, ary nataony mitovy ny anjaran’ny kely sy ny lehibe.+ 16 Ankoatra ireo, dia nahazo anjara koa ny lahy rehetra telo taona no ho miakatra,+ izay voasoratra tao amin’ny tetirazana,+ eny, izay rehetra tonga tao an-tranon’i Jehovah araka ny fanao isan’andro, mba hanao ny fanompoany sy ny adidiny araka ny fizarana nisy azy. 17 Ny fanoratana ny mpisorona sy ny Levita+ roapolo taona+ no ho miakatra, tao amin’ny tetirazany, dia natao araka ny fianakaviambeny,+ araka ny adidiny isaky ny fizarana+ nisy azy avy, 18 ka nosoratana anarana ny vady aman-janaky ny Levita sy ny zanany madinika rehetra, eny, ny fiangonana manontolo, satria nanamasina+ ny tenany hanao ny fanompoany masina ny Levita, izay nanankinana andraikitra noho izy ireo mendri-pitokisana.+ 19 Nosoratana anarana koa ny mpisorona taranak’i Arona+ izay nonina tany amin’ny kijana+ manodidina ny tanànany. Koa tany amin’ny tanàna rehetra, dia nisy lehilahy voatonona anarana izay voatendry hanome ny anjara hanin’ny lahy rehetra teo amin’ny mpisorona sy ny anjara hanin’ny Levita rehetra voasoratra anarana. 20 Toy izany no nataon’i Hezekia nanerana an’i Joda. Ary nanao izay tsara+ sy mahitsy+ foana izy, sady tsy nivadika+ mihitsy teo anatrehan’i Jehovah Andriamaniny. 21 Tamin’ny fony manontolo+ no nanaovany ny asa rehetra natombony momba ny fanompoana+ tao an-tranon’Andriamanitra sy momba ny lalàna+ sy ny didy, mba hitadiavany+ an’Andriamaniny. Koa nahomby+ izy tamin’izany.